ရီးရဲလ်ငွေကစားတဲ့ဆိုဒ်များ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
(564 ပျမ်းမျှအားမဲ: 5.00 )5ထဲက
Loading ... ဂိမ်းပေါ်မှအိမ်အစွန်းနောက်လာမည့်တလောင်းကစားရုံထံမှကွဲပြားခြားနားသော်လည်းရီးရဲလ်ပိုက်ဆံကစားတဲ့, ကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးမြေယာ-based ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများတွင်ကစားနေသည်။ အချို့သောမြို့ကြီးများသို့မဟုတ်တိုင်းဒေသကြီးများပိုကောင်းဂိမ်းအခွင့်အလမ်းများကိုပူဇော်စေခြင်းငှါ, သော်လည်းအသက်ရှင်ဂိမ်းကစားဧရိယာ၌ဤဘာသာဂုဏ်ထူးမကြာခဏတိုက်ကြီးအားဖြင့်ဖြိုဖျက်။ အဘယ်အရာကိုသင်သိသင့်ပါတယ်အဲဒီမှာသင်ရရှိလေးသာမှုအတွက်ကာလတုန်းကမရခဲ့ဘူးကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ကစားတဲ့အသီးအသီးကိုအဓိကဗားရှင်းကိုသင်ပေးထားပါတယ်အဘယ်အရာကိုသင်ယူသည်။ ဤဆောင်းပါး၏သင်တန်းကျော်, သင်တို့ကိုငါမှအဓိကရွေးချယ်စရာဆွေးနွေးရန်ပါလိမ့်မယ်။ ချောပြီးတာနဲ့သင်ကောင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်များလုပ်ကိုသိရန်လိုအပ်သမျှကိုသိသင့်ပါတယ်။
ထိပ်တန်း 10 ကစားတဲ့ဆိုဒ်များများစာရင်း
အမေရိကန် & ဂျာမဏီကစားတဲ့
ဥရောပကစားတဲ့ပြင်သစ် Riviera အပေါ်မိုနာကို၏ကျောင်းအုပ်ကြီးအတွက် Monte Carlo အတွက်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံအားဖြင့်ကျော်ကြားသောလုပ်ဂိမ်းဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘုံသဘောထားအမြင်နေသော်လည်း, Single-သုညဥရောပကစားတဲ့ဂိမ်းမူရင်းဗားရှင်းမဟုတ်ခဲ့ပေ။ အဆိုပါ 19th ရာစုအလယ်၌ဥရောပတိုက်တွင်ဂိမ်းအော်ပရေတာကို double-သုညကစားတဲ့ဂိမ်းကစားခြင်း၏ရာစုနှစ်နှစ်ခုတစ်ဦးအစဉ်အလာတွန်းလှန်, ဖောက်သည်များဆွဲဆောင်ဖို့ Single-သုညဂိမ်းရာပူဇော်သက္ကာကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘောလုံး0အိတ်ကပ်ထဲကတစ်ခုတက်အဆုံးသတ်သောအခါဘီးပေါ်တွင်အများဆုံးကစားနည်းအရှုံးသမားကြောင့်ဘီးပေါ်တွင်တဦးတည်းသုည slot ကသို့မဟုတ်အိတ်ကပ်ထားရှိခြင်းသည်လောင်းကစားသမားတစ်ဦးကြီးတွေအားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းပြချက်အဘို့, 2.70% အိမ်သူအိမ်သားအစွန်းဥရောပကစားတဲ့ဂိမ်းအမေရိကန်ဗားရှင်းထက်အများကြီးပိုကောင်းဖြစ်ပါတယ်။
က 17th နှင့် 18th ရာစုနှစ်များတွင်ကစားခဲ့သည်အဖြစ်အမေရိကန်ကစားတဲ့ပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်ဂိမ်း၏မူလပုံစံဆင်တူပါသည်။ 1 မှတဆင့်နံပါတ်များ 36 များအတွက်အိတ်ကပ်အပြင်ဘီးကိုလည်း0နှင့် 00 slot နှစ်ခုပါဝင်သည်။ နောက်တဖန်, ဒီအပိုဆောင်းဆုံးရှုံးအိတ်ကပ်ထည့်သွင်းအနိုင်ရသင့်ရဲ့အလေးသာလျော့နည်းစေတယ်လေ။ အိမ်သူအိမ်သားအစွန်းလည်းကို double-သုညကစားတဲ့ဟုခေါ်ဝေါ်သောအမေရိကန်သို့မဟုတ် Las Vegas မှာကစားတဲ့အပေါ် 5.26% ဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံးအခြေအနေ, သင်ဖြစ်နိုင်လျှင်, ဒီဂိမ်းကိုရှောင်ရှားချင်ပါလိမ့်မယ်။ ရှားပါးအခါသမယတွင်, သင်သည်ဤယူဆချက်မှောက်လှန်ကြောင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သငျသညျသေချာမသိကြသောအခါ, ဥရောပဘီးကို အသုံးပြု. ဆော့ကစား။
တစ်အုတ်-and မော်တာလောင်းကစားရုံများတွင်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံကစားတဲ့ကစားတဲ့အခါမှာ, သင်ယူရိုဂိမ်းကမ္ဘာပေါ်မှာနေရာတိုင်းအခြားကစားနေစဉ်အမေရိကန်ကစားတဲ့, မြောက်အမေရိကအတွက်အများဆုံးသောနေရာများအတွက်ကစားကြောင်းကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။ အချို့သော Las Vegas မှမြှောင်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံတစ်ပတ်ကာလအတွင်းအချို့သောအချိန်များတွင်သူတို့ရဲ့ဂိမ်းကြမ်းပြင်၏ကို select လုပ်ပါနေရာများတွင် Single-သုညကစားတဲ့, $ 25 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို၏နိမ့်ဆုံးကစားနည်းနှင့်အတူမကြာခဏအဖြစ်မြင့်မားသောဒေါ်လာစျေးဂိမ်းများကိုဆက်ကပ်။ သင်ဂိမ်းများကိုကစားရန်အပတ်တိုင်းတိကျတဲ့အချိန်ကသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ရှိစေခြင်းငှါသော်လည်းထိုအ Vegas မှာမြှောင်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံတစ်လက်တဆုပ်စာ, ရံဖန်ရံခါ $ 15 ဥရောပကစားတဲ့ကိုဆက်ကပ်။ ပြည်သူ့ Tunica အဘိဓါန်လက်တဆုပ်စာကြောင့်အွန်လိုင်း posted ကြပါပြီ, မစ္စစ္စပီကာစီနိုလောင်းကစားရုံအတိတ်တွင် Single-သုညဂိမ်းပူဇျောပါပွီသို့သော်လက်ရှိအချိန်တွင်အမှုဖြစ်ပေါ်လာပါဘူး။
အတ္တလန္တိတ်စီးတီး၌, နယူးဂျာစီပြည်နယ်ဥပဒေများကိုအမေရိကန်ကစားတဲ့အပေါ်အထူးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပူဇော်ဖို့ကာစီနိုလောင်းကစားရုံအတင်း။ ဤရွေ့ကားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို "စိတျအပိုငျးမှာရှိတဲ့" (အမေရိကန် parlance အတွက်) "စိတျအပိုငျး၏" ဟုပြင်သစ်ဖြစ်သော "la partage" ဟုခေါ်ဝေါ်သို့မဟုတ်နေကြသည်။ အဘယ်အရာကိုဤနည်းဥပဒေမသင်0သို့မဟုတ် 00 slot နှစ်ခုတခုတခုအပေါ်မှာပင်ငွေအာမခံနှင့်ဘောလုံးကိုမြေများကိုလုပ်အခါသင်ထက်ဝက်သာသင့်ရဲ့ကစားပွဲကိုဆုံးရှုံးလို့ပြောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကအနက်ရောင် / အနီရောင်ဟာ hi / ထိုအခါအပေါ်တစ်ဦး $ 20 အာမခံလုပ်မိလျှင်, သို့မဟုတ်ပင် / ထူးဆန်းဆိုနှင့်ဘောလုံးကိုသုညပေါ်နိုင်, သင်သာ $ 10 ဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအမေရိကန်ကစားတဲ့၏ဤဗားရှင်းဥရောပကစားတဲ့ထက်အနည်းငယ်ပိုကောင်းအလောင်းအစားကို 2.63% ဖို့ပင်ငွေကစားနည်းပေါ်မှအိမ်အစွန်း halves ။ ကံမကောင်းစွာပဲ, အ Boardwalk ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများအများအပြားယခုတူညီကောင်းသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုကမ်းလှမ်းရာ "Rapid ကစားတဲ့", (အရှင်နယူးဂျာစီပြည်နယ်ဥပဒေများကိုကျေနပ်) ပူဇော်ပေမယ့်စံဂိမ်းထက်ပိုမိုမြန်ဆန်အရှိန်အဟုန်မှာကစားခဲ့ပါတယ်။ သငျသညျမှန်းဆကြလိမ့်မယ်အဖြစ်, ဒီ, အရှင်တစ်နာရီလျှင်အဆိုပါလောင်းကစားရုံရဲ့ပျှမ်းမျှအမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်ခြင်း, အိမ်အစွန်းမှတစ်နာရီလျှင်ပိုပြီးအဆသင်ဖျောထုတျ။
ကစားတဲ့သာအချို့သောပြည်နယ်များရှိကာစီနိုလောင်းကစားရုံအတွက်ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြောင်းသူတို့အားစားပွဲပေါ်မှာဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကော်လိုရာဒို, Connecticut, ဂျော်ဂျီယာ, အိုင်ဒါဟိုနှင့်အီလီနွိုက်နဲ့တူပြည်နယ်များဂိမ်းပူဇော်ထားတဲ့ကာစီနိုလောင်းကစားရုံရှိသည်။ (ဂျော်ဂျီယာ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, သငျသညျလောင်းကစားရုံ cruises ထက်အမှန်တကယ်အုတ်နှင့်အင်္ဂတေကာစီနိုလောင်းကစားရုံမှာရှာနေ။ ) ဖလော်ရီဒါတစ်ကစားတဲ့-type အမျိုးအစားဂိမ်းကမ်းလှမ်းပေမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်နယ်ဥပဒေများကို, သူတို့ကတကယ်ကြောင့်ဖုန်းဆက်ဖို့ခွင့်မပြုထားပါတယ်။
သင်အွန်လိုင်းအစစ်အမှန်ပိုက်ဆံများအတွက်အွန်လိုင်းကစားတဲ့ကစားတဲ့အခါ, သင်မကြာခဏအမေရိကန်နှင့်ဥရောပကစားတဲ့လင့်များ side-by-side ကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။ သင်လောင်းကစားရုံယူအက်စ်အေဂိမ်းမျက်နှာသာပေးသောတိကျတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်ထွက်ရှာမဟုတ်လျှင်ဂိမ်းကစားရာ၏ရွေးချယ်မှု, (ယူရိုဂိမ်းကစား) သိသာသည်။ အချိန်အများစုမှာယင်းအော်ပရေတာရိုးရိုးမသိဘဲအမေရိကန်နှင့်ကနေဒါလောင်းကစားသမားတွေကပိုကောင်းမယ့်ယူဆ, ဂိမ်းများ၏ရိုးရာအမေရိကန်ဗားရှင်း play ကြောင့်မျှော်လင့်ချက်အတွက်, ကစားသမားများကထို option ကိုပေးတော်မူ၏။ တိုက်ရိုက်လောင်းကစားရုံမတူဘဲအော်ပရေတာသည်ဤဂိမ်းကိုကိုင်တွယ်ရန်အပိုဆောင်းဝန်ထမ်းကစားရန်ရှိသည်ပါဘူး, ဒါကြောင့်အပိုဆောင်းဂိမ်း option ကိုကမ်းလှမ်းရန် (software ကိုပံ့ပိုးပေးသူပေါ် မူတည်. ) အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမစရိတ်ပါပဲ။
သငျသညျနှစျယောကျ၏ထို option ရှိသည်နှင့်သင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာမသိရပါဘူးလျှင် ထပ်မံ. ကမ်းလှမ်းဂိမ်း၏ဥရောပဗားရှင်းကစား။ အခွင့်အလမ်းတွေကိုကပိုကောင်းတဲ့ option ကိုဖွင့်ဖြစ်ကြသည်။ ငါ (/ ထောင်ချစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို "ထောင်ထဲမှာ en" သို့မဟုတ်အလားတူ) "la partage" စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုကမ်းလှမ်းရာအစစ်အမှန်ပိုက်ဆံများအတွက်ဥရောပကစားတဲ့သင် play နိုင်ပါသည်အကောင်းဆုံးဗားရှင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားခြင်းသငျ့သညျ။ ဤသည်အိမ်သူအိမ်သားကင်လုပ်ခိုင်းနှင့် Baccarat တူသောဂိမ်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ဖြစ်သော 1.35%, ဆင်း Edge ကိုလျော့နည်းစေတယ်လေ။ တနည်းအားဖြင့်ဂိမ်းဒီအထူးဗားရှင်းမျှမဟာဗျူဟာအစိတ်အပိုင်းရှိပြီးသောအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံများတွင်မဆိုဂိမ်းအတွက်အကောင်းဆုံးလေးသာမှုအချို့ရှိပါတယ်။ Baccarat, ကင်လုပ်ခိုင်းနှင့်ကစားတဲ့ (အောင်ကစားနည်းဖြစ်သော သိ. မှတပါး) မှတ်မိဖို့နည်းနည်းမဟာဗျူဟာရှိသည်ဖို့လေ့, ဒါသူတို့လေ့လာလောင်းကစားစဉ်ချွန်ထက်ဆက်လက်တည်ရှိရန်မလိုဘဲအကောင်းဆုံးကိုအလေးသာပေး။
ကစားတဲ့အာမခံ - အတွင်းပိုင်းကစားပွဲအတွက်
အတွင်းပိုင်းကစားနည်းတစ်ခုတည်းနံပါတ်များသို့မဟုတ်ချိတ်ဆက်နံပါတ်အသေးအဖွဲ့များကိုအပေါ်ကိုဖန်ဆင်းသောသူတို့အားဖြစ်ကြသည်။ သင့်ရဲ့အလောင်းအစားချစ်ပ်နံပါတ်များ layout ကိုအတွင်းအပြင်နေရာချကြသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာကစားနည်းအတွင်းပိုင်းကိုခေါ်ပါတယ်။ အဆိုပါဖြောင့်လောင်းတဦးတည်းတစ်ခုတည်းအရေအတွက်ကိုကပါဝင်ပတ်သက်, နှင့်သင်အရေအတွက်အပေါ်တိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့ချစ်ပ်ကိုနေရာချပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါအုပ်စုခွဲအလောင်းအစား2နံပါတ်များအဘို့ဖန်ဆင်းထားသည်, ထိုသို့သူတို့အားနှစ်ခုနံပါတ်များကိုခွဲထုတ်လိုင်းပေါ်မှာနေရာချစကာရဲ့။ လမ်းပေါ်မှာအလောင်းအစားထိုကဲ့သို့သော 3-1-2 ဒါမှမဟုတ် 3-4-5 အဖြစ်တတန်းအတွက်6နံပါတ်များ, အပေါ်ကိုဖန်ဆင်းသည်။ သင်ကနံပါတ်များကိုတိုတောင်းတဲ့လမ်းသွား၌ရှိကြ၏ကတည်းကသူတို့တစ်တွေလမ်းပေါ်ခေါ်, ဒီ sequence ကိုစတင်သည်နှင့်သောနံပါတ်၏အပြင်ဘက်တွင်လိုင်းပေါ်မှာဤလောင်းပါလိမ့်မယ်။
အတွင်းအပြင်ကစားနည်းများ၏စာရင်းဆက်လက်, ထောင့်သို့မဟုတ် quad အလောင်းအစား4နံပါတ်များကိုပါဝငျသညျ။ ဤရွေ့ကားလေးနံပါတ်များကိုသငျသညျလေးထောင့်ကိုအတူတကွဆုံမှတ်ရှိရာချစ်ပ်နေရာခွင့်ပြု, ဆုံမှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ တောင်းအလောင်းအစားအမေရိကန်ကစားတဲ့အတွက် 5-number ကိုအာမခံဖြစ်ပြီး, က 0, 00, 1,2နှင့်3ပါဝငျသညျ။ ဒါကြောင့်ဂိမ်းထဲမှာအဆိုးဆုံးအလေးသာရှိပြီးသောကြောင့်, တောင်းအလောင်းအစားလုပ်မနေပါနဲ့, က 7.89% အိမ်သူအိမ်သားအစွန်းရှိပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့နှစ်ဆလမ်းသို့မဟုတ်အတန်းအလောင်းအစားတစ်ကြိမ်မှာနှစ်ခုကပ်လျက်လမ်းကစားနည်းပါဝငျသညျ။ သငျသညျအရေအတွက်က sequence ကို၏အပြင်ဘက်ဆီသို့တစ်ဖန်, နှစ်ခုလမ်းများအကြားလိုင်းပေါ်ချစ်ပ်ကိုနေရာချပါလိမ့်မယ်။
ကစားတဲ့အာမခံ - ပြင်ပကစားပွဲအတွက်
အတွင်းအပြင်ကစားနည်း6ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းနံပါတ်များပါဝင်နေစဉ်, ပြင်ပကစားနည်းတစ်ကြိမ် 12 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုနံပါတ်များပေါ်တွင်လောင်းကစားပါဝငျသညျ။ သင်ဤအာမခံနံပါတ်အမျိုးအစားများအပေါ်ဆိုနိုင်ဘူး။ ပိုပြီးနံပါတ်များကိုအပေါ်သို့ wagered နေကြသည်ကြောင့်ဆုကြေးငွေသေးငယ်သော်လည်းဤကစားနည်းအနိုင်ရတဲ့၏အခွင့်အလမ်းတွေကို, အထဲမှာစီမံခန့်ခွဲရန်အပေါ်ထက် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျအထူးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအသုံးပြုနေသည်မဟုတ်လျှင် (box ကိုအလောင်းအစားမှတပါး), အားလုံးကစားတဲ့စီမံခန့်ခွဲရန်, တူညီတဲ့အလေးသာရှိသည်သောစိတ်ကိုထားပါ။ က "တကျိပ်နှစ်ပါးရဲ့" ပေါ်တွင်လောင်းကစား 1, ဒါမှမဟုတ် 12 မှတဆင့် 13 မှတဆင့်ဖြစ်စေ 24 အပေါ် 25, 36 မှတဆင့်အလောင်းအစားပါဝင်သည်။ တစ်ပင်ငွေအလောင်းအစားပြုလုပ်ခြင်းသည်မြင့်မားသော / အနိမ့်အဆိုပြုပေါ်တွင်အနက်ရောင် / အနီရောင်အဆိုပြု, သို့မဟုတ်ပင် / ထူးဆန်းအဆိုပြုအလောင်းအစားပါဝင်သည်။ သငျသညျအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဘီးပေါ်တွင် 1 slot နှစ်ခု၏ရှေ့မှောက်တွင်၏သူတို့ကိုနှိပ်တစ် 1% အခွင့်အလမ်း, ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး 50, ဒါပေမယ့်သတိရ: သူတို့0မှာချွတ်ပေးဆောင်ကြောင့်ဤတောင်မှငွေစီမံခန့်ခွဲရန်ခေါ်ပါ။
ကော်လံကစားနည်းနံပါတ်သုံးအုပျစုမြား၏တဦးတည်းအပေါ် 12-number ကိုကစားနည်းဖြစ်ကြသည်။ အရေအတွက်က layout ကို3အရေအတွက် 36 ကော်လံပါဝင်သည်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီကော်လံအထဲတွင် 12 နံပါတ်များကိုရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, တဦးတည်းကော်လံနံပါတ်များ 1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34 ပါဝငျသညျ။ သငျသညျအသီးအသီးကော်လံ၏အောက်ခြေတွင်သည်ဤစီမံခန့်ခွဲရန်ထားပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင် layout ကို crisscross ရသောနံပါတ်များကိုတစ်ဦးမြွေပုံစံပေါ်တွင်မြွေအာမခံစေနိုင်သည်။ ပါဝင်သည်အဆိုပါနံပါတ်များ 1-5-9-12-14-16-19-23-27-30-32-34 ဖြစ်ကြသည်။ သော်လည်းသင်အလေးသာဒီအာမခံပေါ်တူရှိနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်သင်သည်မဟုတ်ရင်ကအဓိပ္ပါယ်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီပါဘူးမယ်လို့သကဲ့သို့သငျရိုးရှင်းစွာသောဤနံပါတ်တစ်ခုချင်းစီကိုအပေါ်တစ်ခုတည်းယူနစ်လောင်းကစားနေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကတစ်ဦး sucker လောင်းသည်ဤပဌနာကိုနားထောငျပါလိမ့်မယ်။
သင်အွန်လိုင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံမှာဤစီမံခန့်ခွဲရန်အသီးအသီးမိမိတို့အ software ကိုအထုပ်ထဲမှာကိုကမ်းလှမ်းနေသည်။ တစ်ခုအတွင်း၌သို့မဟုတ်ပြင်ပမှာအလောင်းအစားအကြားရွေးချယ်မှုကယ့်ကိုသငျသညျအနိုင်ရရန်နှင့်သင်ပြုသည့်အခါဘယ်လောက်ကိုသင်ပေးဆောင်နေချင်သလဲဆိုတာကိုမကြာခဏနှင့်အတူလုပ်ဖို့ကပိုရှိပါတယ်။ သင်တစ်ဦးလောင်းကြေးအနိုင်ရလှည့်ခြင်းများ၏ပျင်းစောင့်ဆိုင်းများစွာရလိုလျှင်, သင်အပြင်ဘက်စီမံခန့်ခွဲရန်ကစားသင့်ပါတယ်။ သငျသညျကြီးတွေဆုကြေးငွေရှိသည်ဖို့ကပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကိုရှာဖွေလျှင်, သင်အတွင်းပိုင်းစီမံခန့်ခွဲရန်ကစားသင့်ပါတယ်။ box ကိုအလောင်းအစားအပြင်အားလုံးစီမံခန့်ခွဲရန်တူအိမ်သူအိမ်သားအစွန်းရှိသည်, ဒါကြောင့်ကြိုးစားရန်အရာလောင်းရွေးချယ်အတွက်မဟာဗျူဟာအားသာချက်ကိုရှာဖွေမျှော်လင့်ထားပါဘူး။
သင်သည်အခြားရှုထောင့်ကနေသင့်ရဲ့အလေးသာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိုလျှင်သော်လည်း, သငျသညျရှိပါတယ်အိမ်တော်ကိုသင်တို့အပေါ်မှာတိုင်းလှည့်ဖျားအစွန်းရှိတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောပြ, ဒါကြောင့်နည်းပါးလာလှည့်ခြင်းများလိမ့်မယ်, ပိုကံနှင့်မဖြစ်နိုင်ခြေရလဒ်အကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ်။ (ဥပမာ) အ 35th လှည့်ဖျားပေါ် 1 ပေးချေမှုနှင့်anice ပေးချေမှုနှင့်အတူထွက်သွားလမ်းလျှောက်: သင်တစ်ဦး 20 အနိုင်ရနိုင်ကတည်းကကြောင့်ဇာတ်လမ်းများတွင်ကကစားနည်းအတွင်းအပြင်နေရာပိုပြီးသဘာဝကျပါတယ်။ သငျသညျ 1 ဘို့စပါးကိုကြိတ်လျှင်: 1 နှင့် 2: 1 ဆုကြေးငွေကိုသင်အိမ်တော်ကိုအစွန်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, အတွင်းပိုင်းစီမံခန့်ခွဲရန်အားမရကြောင့် 50 မှ 100 တဦးတည်းသီးခြားရေတွက်ဘဲရာအရပျယူ spins ရှိသည်ဖို့မေးခွန်းထဲကမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ကစားနည်းတစည်းကိုဆုံးရှုံးနှင့်သင့်ဂိမ်းကစားဘို့အပြသရန်ဘာမျှမရှိသည်ဘယ်မှာအစည်းအဝေးများများများရှိသည်လိမ့်မယ်ဆိုလိုတယ် အစဉ်အဆက်နှိပ်။ သင်တို့ကိုအလောင်းအစားနေအရေအတွက်ကိုင်လျှင်, သင်ပိုက်ဆံတစ်တန်ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။
သင်ဖျောပွ la partage သို့မဟုတ်ထောင်ဒဏ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ကစားနေသည့်အခါဤတောင်-ပိုက်ဆံကစားနည်း, ဒါပေမယ့်ကိုသာပင်-ပိုက်ဆံကစားနည်းပေါ်မှအိမ်အစွန်း halve ကြောင့်အထက်ထည့်သွင်းစဉ်းစား, လျှောက်ထားကြပါဘူး။ သငျသညျဥရောပသို့မဟုတ်အမေရိကန်ဖြစ်စေအစစ်အမှန်ပိုက်ဆံကစားတဲ့တွင်ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ကစားနေလျှင်၎င်းသည်အစဉ်အမြဲ / အနီရောင်အနက်ရောင်, မြင့်သော / အနိမ့်, ဒါမှမဟုတ်ပင် / ထူးဆန်းပေါ်တွင်ပင်-ပိုက်ဆံကစားနည်းစေရန်ပိုကောင်းတဲ့အဆိုပြုပါတယ်။
0.1 ထိပ်တန်း 10 ကစားတဲ့ဆိုဒ်များများစာရင်း
2.1 အမေရိကန် & ဂျာမဏီကစားတဲ့
2.2 ရီးရဲလ်ငွေကစားတဲ့ Play
2.4 ကစားတဲ့အာမခံ - အတွင်းပိုင်းကစားပွဲအတွက်
2.5 ကစားတဲ့အာမခံ - ပြင်ပကစားပွဲအတွက်